Mogadishu Journal » 2016 » August » 4
Mjournal :–Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya,Michael Keating ayaa ku dhawaaqay inay doonayaan doorashada inay ku dhacdo waqtigeeda,isagoo marka ka hadlayay doorka Qaramada Midoobay ee doorashada dalka ka dhacaysa. Waxuu sheegay inuu dhigayo dastuurka wali qabyada ah...
Mjournal :–Iran waxay xukun dil ah ku fulisay dad badan oo 20 qof dhan oo ay sheegtay inay ka tirsanaayeen koox argagixiso oo Sunni ah. Xeer ilaaliyaha guud waxaa uu sheegay in raggaasi lagu helay inay geysteen qaraxyo xiriir ahaa iyo weerarro lagu qaaday deegaanno dadka...
Mjournal :–Nin asalkiisa la sheegay in uu Soomaali yahay ayaa la xiray kaddib markii qof dumar ah lagu dilay shan kalena la dhaawacay weerar mindi oo ka dhacay Russell Square, ee bartamaha London xalay. Boliiska ayaa loo yeeray xalay in nin uu dhaawacay dad, oo ay ku jirto...
Mjournal :–Shirka Baarlamaanka Afrika oo maalmahan ka socday K/Afrika ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Johannseburg, waxaana Soomaaliya u matalayay Xoghayaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Mudane C/kariim Xaaji Cabdi Buux. Shirkan ayaa intii uu socday waxaa...
Mjournal :–Muddo 100 Sano ah oo ka soo wareegtay kadib, wuxuu Madaxweynaha Mareykanka barack obama cafiskii ugu dheeraa u fidiyay 240 Maxbuus oo 67 ka mid ah ay ku xunaayeen xabsi da’im, kuna jiray jeelasha dalka Mareykanka. Cafiskan ayaa ah, kii ugu weynaa ee Madaxweyne...
Mjournal :–Kooxda Boko Haram ee ka dagaallanta dalka Nigeria ayaa loo magacaabay Hoggaamiye cusub oo bedelaya hoggaamiyahoodii hore. Kooxdan islaamiga ah,waxaa ay sanadkii 2015 ku biireen ururka isku magacaaba dowladda Islaamiga ah ee ISIS,waxaana hadda waxii ka dambeeya la...
A US citizen in her 60s was killed in Wednesday night’s knife attack in Russell Square, Bloomsbury, in which five other people were injured, the London Assistant Police Commissioner has confirmed. Mark Rowley said among the injured were Australian, British and Israeli citizens....
Wasaarada ammniga oo digniin soo saartay
Mjournal :–Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya C/risaaq Cumar Maxamed, ayaa uga digay Siyaasiyiinta Soomaaliyed inay arimo Siyaasadeed u adeegsadaan falalka lidiga ku ah dhanka ammaanka Magaalada Muqdisho ka dhaca. Muddooyinkaan dambe Magaalada Muqdisho waxaa ku soo batay...
Madaxweynaha Uganda oo xukunka sii heysanaya inta cimrigiisa ka dhiman
Mjournal :–Saraakiil ka tirsan xisbiga talada haya ee dalka Uganda ayaa doonaya in ay ka saaraan dastuurka dalka Uganda xadka da’ada ee Madaxweynaha dalkaas si uu mar kale ugu tartamo Yoweri Musaveni xilka madaxtinimada dalkiisa. Museveni oo talada dalka Uganda markii hore...
Mjournal ::–Shirka Madasha Wada-tashiga Qaran oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu wadaa in la soo gaba gabeeyo, iyadoo go’aan laga gaari doono xilliga ay dhaceyso doorashada. Madaxda Madasha ayaa wali rasmi ahaan isku afgarin mudada dib loo dhigayo...